असोज १३, २०७५ शनिवार १४:४८:१४
शल्यक्रियाद्वारा मुटुमा रगतको आपूर्ति चालू राख्न वैकल्पिक बाटो बनाउने प्रक्रियालाई ‘कोरोनरी आर्टरी बाइपास सर्जरी’ भनिन्छ। एन्जियोप्लास्टीको प्रक्रियाबाट धमनीले रगत आपूर्ति जारी राख्ने सम्भावना नभएमा मुटुको बाइपास शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारणतः अलि धेरै ठ...
साउन १३, २०७५ आइतवार ०९:३०:४०
प्रश्न: किन हुन्छ दाँत सिरिङ–सिरिङ? बच्ने उपाय र उपचार के होला ? - जीवन उत्तर : हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो दाँतको बाहिरी भागलाई इनामेल भनिन्छ। इनामेलभन्दा भित्रको भाग डेन्टिन हो। सबैभन्दा भित्रको भागलाई पल्प भनिन्छ। विभिन्न कारणबस इनामेल...
सास गन्हाउँछ, कसरी छुटकारा पाउने ?
असार २६, २०७५ मगलवार ०९:३३:०७
प्रश्न : मेरो सास गन्हाउँछ। के के कारणले यस्तो समस्या हुन्छ? यो समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने ? - केडी उत्तर: सास गन्हाउने अहिले आम मानिसको साझा समस्या भएको छ। युवादेखि वृद्धहरुसम्म यो समस्याबाट ग्रसित देखिन्छन्। सास गन्हाउने अनेक कारण छन्। ती कारण पहिल्याएर बानी व्यव...
असार ८, २०७५ शुक्रवार ०९:४२:५३
प्रश्न : म २४ वर्षको छु। अविवाहित हुँ। तर, मेरो स्तनबाट दूध चुहिने समस्या देखिएको छ? निकै तनावमा छु। के हो स्तनबाट दूध चुहिने समस्या? के कारणले हुन्छ र उपचार के हो ? - एस उत्तर : जिज्ञासाका लागि धन्यवाद। तपार्इ‌को जस्तै समस्या भएका धेरै युवतीको उ...
बोसो प्रत्यारोपण कस्तो अवस्थामा गर्ने, कति सुरक्षित ?
असार २, २०७५ शनिवार १२:११:५७
प्रश्न: बोसो प्रत्यारोपण भनेको के हो? यो कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ अनि कति सुरक्षित छ होला ? - एस कोइराला उत्तर : सुन्दर बन्न मानिसहरु विभिन्न उपाय अपनाउछन्। कसैले सौन्दर्य प्रशाधनको प्रयोग गर्छन् भने कसैले कस्मेटिक सर्जरीको सहारा लिन्छन्। कसैले भने प्रत्यारोपण ...
जेठ २२, २०७५ मगलवार ११:०१:१६
श्वासप्रश्वास प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले सासभित्र लिने र बाहिर फ्याँक्ने गर्छाैं । यो शरीरका लागि अनिवार्य अक्सिजन परिपूर्ति गर्ने प्रक्रिया हो । तर, हावामा स्वास्थ्यका लागि नभई नहुने अक्सिजन मात्र होइन, धेरै मात्रामा हानी गर्ने तत्वहरु मिसिएका छन् भने त्यसलाई प्रदूषणका रुपमा बुझ्न...
घरमै डाक्टर : च्यातिएको कानको लोतीको उपचार के हो ?
चैत १३, २०७४ मगलवार १२:५९:००
हाम्रो समाजमा सुन्दरता झल्काउन कानमा सानो टप, झुम्कादेखि ठूल्ठूला गरगहना लगाउने चलन छ । अझ विवाह, चाडपर्वमा त गहना मोहको होड नै चल्छ । राम्रो देखिन लगाउने यस्ता गहनाले समस्या निम्त्याएको हामीलाई पत्तै हुँदैन । रिङ, कुण्डल, झुम्का लगाउनाले कानको लोती च्यातिने र प्वाल ठू...
फागुन २४, २०७४ शुक्रवार ०१:५०:३१
क्यान्सर भन्ने बित्तिकै बुढाबुढी वा वयस्कलाई मात्र लाग्ने रोग भन्ने आम बुझाइ छ। तर, बच्चाहरुलाई पनि क्यान्सर हुन सक्छ। बालबालिकामा विभिन्न अंगहरुको क्यान्सर हुन्छ। यी मध्ये एक हो मिर्गौलाको क्यान्सर। नेफ्रोब्लास्टोमा पनि भनिने मिर्गौलाको यो क्यान्सर तीनदेखि चार वर्षसम्मका बच्चाहरु...
घरमै डाक्टर: किन हुन्छ महिलाको वक्ष क्यान्सर ?
फागुन १६, २०७४ बुधवार १५:३३:०८
स्तनका कोषहरू असामान्य रूपमा वृद्धि हुन थालेपछि स्तन क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ । साधारणतया कोषहरूको वृद्धि र विभाजन शरीरको आवश्यकता अनुसार हुन्छ । तर, जब शीघ्र रूपमा र धेरै मात्रामा कोषहरू वृद्धि र विभाजन हुन्छन्, पुराना कोषहरू टाँसिएर रहन्छन् तब गिर्खा वा ट्युमर बन्ने प्रक्...
प्रेसर नाप्नुअघि यी कुरा जान्नै पर्छ
फागुन ५, २०७४ शनिवार १२:४९:००
एजेन्सी – प्रेसर नाप्दा शरिर सिधा भएर बस्नु पर्छ । प्रेसर लिनु भन्दा अगाडि व्यायाम गर्नु हँुदैन । प्रेसरको सत्यतथ्य नापेको समय र नाप्दा बस्ने पोजिसन लगायतमा निर्भर पर्छ । प्रेसर नाप्नुअघि बाइक चलाएको हो वा सहवास गरिएको छ भने त्यसले पनि प्रभाव पार्छ । सुरुमा ब...
निद्रामा बरबराउने समस्या के हो ?
फागुन ५, २०७४ शनिवार १२:०१:००
निद्रामा ९० मिनेटको चक्र हुन्छ । पहिलो २० मिनेटलाई शुरूवाती निद्रा भनिन्छ । यो अवस्थामा हामी तुरुन्तै उठ्न सक्छौं । यसलाई ‘स्टेप स्लिप’ भनिन्छ । त्यसपछि करिव ५० मिनेट गहिरो निद्रा हुन्छ । गहिरो निद्रामा पुगेपछि मानिसलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ र चक्रको अन्तिम १०&nd...
घरमै डाक्टर : मुटुले कहिलेबाट काम गर्न सुरु गर्छ ?
फागुन ४, २०७४ शुक्रवार १७:१८:००
प्रश्न : मुटुले कहिलेबाट काम गर्न सुरु गर्छ ? यसले के काम गर्छ ? - जेबी उत्तर : मानव शरीरमा सबैभन्दा पहिला काम गर्न सुरु गर्ने अंग मुटु हो । मानिसको जीवन मुटुको धड्कनबाट सुरु हुन्छ र अन्त्य पनि मुटु बन्द भएसँगै हुन्छ । मानिसको मुटु आमाको पेट भित्र रहँदादेखि ...
फागुन ४, २०७४ शुक्रवार १४:१८:३८
भर्खरै महिनावारी सुरु भएका केही किशोरीमा अस्वभाविक रुपमा मोटाउने, अत्याधिक मात्रामा डन्डीफोर देखिने, ओठ तथा शरीरका अन्य भागमा रौँ पलाउने र महिनावारी पनि गडबडी हुने गर्दछ । शारीरिक आउने यस्तो परिवर्तनले युवती मात्र होइन परिवारका सदस्य पनि चिन्तित बन्छन् । अझ विवाहित ...
घरमै डाक्टर– मुटुमा के-के रोग हुन सक्छन् ? सवैभन्दा खतरनाक के हो ?
फागुन १, २०७४ मगलवार १६:५०:००
आममानिसमा मुटुरोग भन्नासाथ हृदयघात र हार्ट फेल मात्र हो भन्ने भ्रम छ । तर, मुटका अन्य थुप्रै रोग हुन्छन् । मुटु र रक्तनली सम्बन्धित भएकाले मुटुका सयभन्दा बढी रोग हुने गरेको डा प्रकाशराज रेग्मी बताउँछन् । तीमध्ये डाक्टरहरुले मुटुका रोगलाई जन्मजात मुटुरोग, बाथ मुटुरोग र जी...
माघ २७, २०७४ आइतवार ००:०३:०४
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार जन्मदा बच्चाको तौल करिब ३ किलो हुनुपर्छ । तौल तीन महिनामा ५ किलो, ६ महिनामा ६ किलो, ९ महिनामा ७ किलो र एक वर्ष पुग्दा १० किलो हुनुपर्छ । कहिलेकाँही तेस्रो र छैठौं महिनामा बच्चाको तौल घटेको पनि हुनसक्छ । तर बच्चाको तौल थोरै घ...
घरमै डाक्टर : कान चिलाउने कारण के हो ?
माघ २५, २०७४ शुक्रवार ०१:५९:००
प्रथमतः कानमा फोहर जम्मा भएमा चिलाउने समस्या हुन्छ । कानमा गहिरो भाग हुने भएकोले टाउको र बाहिरी भागबाट आएका फोहर पनि कानमा सजिलै जम्मा हुन्छ । धेरै फोहोर जम्मा भएपछि यसले चिलाउने समस्या निम्त्याउँछ । कान चिलाउँने दोस्रो कारण भनेको अटोमाइकोसिसको समस्या हो । यसलाई क...
ब्रेकफास्ट नखाँदा हुने रोग ‘एथरोस्क्लेरोसिस’ के हो ?
माघ २४, २०७४ बुधवार १२:१९:००
सन्तुलित र स्वस्थ्य भोजन गर्नु शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण छ । त्यसैगरी दिनको सुरुवात सन्तुलित खानेकुराबाट गर्नु अझै महत्वपूर्ण रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। हामीमध्ये कतिपय बिहानको खाजा खाँदैनौं वा भनौं मन पराउँदैनौं । खानेकुरा मन नपराएर होइन क...
माघ २०, २०७४ शनिवार २०:५४:००
हिँड्ने क्रममा खुट्टामा पीडा हुन्छ या खुट्टाको औंलामा पोलेको जस्तो अनुभव हुन्छ भने भास्कुलर रोग लागेको हुन सक्छ । यो लेग अट्याकको पहिलो लक्षण हुन सक्छ । लेग अट्याक हर्ट अट्याकभन्दा बढी खतरापूर्ण हुन्छ । सुरुमै पत्ता लाग्यो र उपयुक्त उपचार भयो भने यो सजिलै निको हुन्छ । तर, उ...
माघ १६, २०७४ मगलवार १४:४४:००
भारतको मुम्बईस्थित बीआइएल नायर च्यारिटेवल अस्पतालमा पुगेका एक युवकको एमआरआई मेसिनमा ठोक्किएर मृत्यु भएको समाचारपछि डर बढेको छ। राजेश मारु नामका ती ३२ बर्षीय युवकलाई सो अस्पतालका वार्ड ब्वाइले अक्सिजन सिलिन्डर एमआरआई रुममा लगिदिन आग्रह गरेका थिए । उनी सि...
घरमै डाक्टर : पुरुषको छाति बढेर महिलाको झैँ देखिने रोग गाइनेकोमस्टिया के हो ?
माघ १०, २०७४ बुधवार १३:४४:००
महिलामा जसरी स्तनको वृद्धि विकास जन्म पश्चात युवा आवस्थादेखि प्रौढसम्म देखिन्छ । त्यसरी नै पुरुषमा पनि जन्म पश्चात स्तनका अवशेष रहेको देखिन्छ । तर, सामान्यतया पुरुष स्तनको वृद्धि विकास हुँदैन। गाइनेकोमस्टिया भनेको पुरुष स्तन वढ्दै जाने समस्या हो। जसमा कारकका रुपम...